Global Voices teny Malagasy » Tian’ny Mpanelanelana Serbiana Ho Roahana Ny Lehiben’ny Mpitandro Filaminana Any Belgrade Noho Ny Fanohintohinany Ny Asan’ny Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Tian'ny Mpanelanelana Serbiana Ho Roahana Ny Lehiben'ny Mpitandro Filaminana Any Belgrade Noho Ny Fanohintohinany Ny Asan'ny Mpanao Gazety
Voadika ny 25 Marsa 2016 12:33 GMT 1	 · Mpanoratra Milka Domanovic Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Serbia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Mpiandraikitra ny mpitandro filaminana kaominaly manakana ny asan'ny mpanao gazety any Belgrade. Septambra 2015. Sary : Istinomer.rs. Nahazoana alàlana.
Nitaky ny fandroahana ny lehiben'ny mpitandro filaminana monisipaly Nikola Ristić ny mpanelanelana Serbiana, Saša Janković, noho ny nahitàny fa nandika lalàna taminà tranga isan-karazany tamin'ny faran'ny taon-dasamahakasika mpanao gazety ilay sampan-draharaha.
Tsy isan'irony mpitandro filaminana mahazatra mampiasa hery ny mpitandro filaminana kaominaly fa vondrona iray natsangan'ny fitondrana ao an-toerana mba hamahàna ny olana mifandraika amin'ny fikojakojàna ny tanàna sy ny filaminan'ny fiarahamonina. Nasehon'ny fanadihadiana nataon'i Janković fa rahonan'ireo mpitandro filaminana kaominaly ireo mpanao gazety avy amin'ny tranonkala mpanamarina ny tea zavamisy, Istinomer  (Truth-O-Meter – Fandrefesana_ny_Marina) sady nampiasàny hery ireo mpaka sariny tamin'ny 25 Septambra 2015 ( Fanamarihana : mpiasa a amin'ny Istinomer ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.)
Hita ihany koa fa nopotehin'ireo mpitadro filaminana kaominaly ireo sary sy ireo raki-dahatsary nataon'ny ekipa iray an'ny Tambajotra Mpitatitra ny Heloka Bevava Sy Ny Kolikoly (KRIK ) , tamin'ny fangiazana ny fitaovam-piasàny tamin'ny 2 Oktobra 2015.
Saša Janković. Sary avy ami'ny Medija Centar Beograd. Sehatra ho an'ny daholobe.
Araka ny tatitry ny Global Voices Advocacy tamin'izany fotoana izany, dia tsy navelan'ny  mpitandro filaminana kaominaly haka sary ny resadresaka teo amoron'ny ranon'i Sava ny mpanao gazetin'ny Istinomer ny 25 Septambra , andro vitsivitsy mialoha ny hanombohana ofisialy ilay tetikasa mampifanolana momba ny fanatsaràna ny moron'i Belgrade.  Nampangain'ireo mpitandro filaminana ho nanandrana naka sary ilay toeram-panorenana ireo mpanao gazety nefa tsy nahitàna ny asa fanorenana teo amin'ilay toerana ilay lahatsary.
Tokony ho nanao fanadihadiana momba ny asan'ny olony tamin'ny zava-niseho tamin'ny Istinomer ny Lehiben'ny mpitandro filaminana Kaominaly Ristić araka ny hevitr'i Janković, saingy tsy nataony izany. Fomba fandikan-dalàna 30  no nataon'ny mpitandro filaminana kaominaly tao anatin'ny 14 minitra monja hoy ilay mpanelanelana.
Tokony ho iray volana aty aoriana, nafenin'ny mpitandro filminana kaominalin'i Belgrady ny fitaovana fakàntsarin'ny mpanao gazetin'ny KRIK ary novonoiny ny sasany amin'ny lahatsarin-dry zareo. Sefo Ristić mihitsy no nanakana ny mpanao gazetin'ny KRIK iray tsy haka sary ilay zava-niseho, sady nanome vaovao tsy marina momba izany avy eo, hoy ny mpanelanelana Janković.
Noraketin'ny KRIK tamin'ny finday ilay tranga, mampiseho ny lehiben'ny mpitandro filaminana kaominaly sy ny lefiny mibahana ara-batana ireo mpanao gazety izay nivonona ny hanontany ny Ben'ny tanànan'i Belgrade Siniša Mali momba ny nahazoan'ireo orinasa an-dranomasina roa izay tantànany ireo trano 24 any amin'ny toerana fialàntsasatra Bolgara. Tamin'izay fotoana izay, tsy nanao ny fanamiana izay tsy maintsy anaovan'izy ireo rehefa amperinasa ireo mpitandro filaminana roa ireo.
Ao amin'ity lahatsary fampiharihariana manaraka izay navoakan'ny Istinomer ity, dia nohazavain'ny mpanao gazetin'ny KRIK, Dragana Pećo, fa vitany ny nanavotra ilay lahatsary novonoin'ny mpitandro filaminan'ny kaominina izay niangia nandritry ny fotoana fohy ny findainy. Ny fandàvan'i Sefo Ristić ny tsy mety rehetra momba ny finday ary koa ny fangalàny ilay finday teny an-tanan'ilay mpanao gazety no hita ao amin'ilay lahatsary.
Na dia am-polony mahery aza ireo mpikambana ao amin'ny mpitandro filaminana kaominaly nandray anjara tamin'ireo raharaha roa ireo dia mpiandraikitra iray ihany no niharan'ny fepetra famaizana.
“Tsy ampy ny hoe ny mpiandraikitra mpitandro filaminana izay nanao zavatra [ tsy nety] no mandray andraikitra, satria nanao izany teo anatrehan'ny lehibeny izy… Fa nisy ny fampiasàna hery tsy ara-dalàna, nisy ny fandrahonana… Maro ny hadisoana vita,” hoy ny mpanelanelana, Janković.
Na izany aza tsy nanisy resaka ny fanamarihan'i Janković i Ristić, ary ny Ben'ny tanànan'i Belgrade Mali kosa nilaza fa mila fotoana misimisy kokoa  izy mba handinihana ilay olana.
Namoaka fanambaràna manohana ny fangatahan'i Janković ny Fikambanan'ny mpanao gazety tsy miankina any Serbia (NUNS), raha toa ka nanameloka ny fitondrantenan'ny mpitandro filaminan'ny tanàna ao amin'ny bitsika nalefany ny Komitin'ny mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona (YUCOM), tamin'ny fiampangàna ireo mpitandro filaminana ho nampiasa hery tafahoatra sady nanao fanararaotam-pahefana.
Namafisin'i Janković fa ny fihenjanan'ny fitantanana ny tanàna dia loza mananontanona ny fahalalahan'ny fanehoankevitra sy ny fahalalahan'ny haino aman-jery ao amin'ny tanàna iray izay efa tena tsy mahafehy ny fahefan'ny mpitandro filaminana intsony. Io vondrona izay naorina tokony ho dimy taona lasa izay  io no nanjary nampifanolana  nandritra ny taona maro, noho ny fampiasan-kery miverimberina atao amin'ny olom-pirenena tsotra, indrindra fa ireo ampangaina fa tsy nandoa ny saran'ny fitaterambahoaka. Hazavain'ny tonian-dahatsoratry ny KRIK, Stevan Dojcinovic, amin'ny lahatsary nalefa teo aloha teo  fa nandritra ny zava-niseho tamin'ny Oktobra dia tahaka ny ‘ karazan'ny mpiambina manokan'ny Ben'ny tanàna ” ny mpiandraikitra ny mpitandro filaminan'ny tanàna, tsy manao fanamiana sady misy ahalalàna azy.
Misy volavolan-dalàna iray vaovao mampifoha ahiahy vaovao ihany koa. Mety omen'ny lalàna fahefana bebe kokoa  ny mpitandro filaminana kaominaly, amin'ny fametrahana fepetra vitsivitsy amin'ireo manamboninahitra. Ohatra, azon'ny mpitandro filaminana atao ny mitondra ireo olona voatazona any amin'ny mpitsara avy hatrany, fa tsy manao ny fanadihadiana ao amin'ny biraon'ny mpitandro filaminana. Mety hampitombo ny isan'ny mpitandro filaminana io hetsika io, hanome fahefàna ireo mpitandro filaminana maro hanao fisafoana eny an-dàlambe anaty fitafin'olon-tsotra .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/03/25/79258/
 Nitaky : http://zastitnik.rs/index.php/lang-sr/2012-02-07-14-03-33/4586-2016-02-04-09-05-51
 tsy navelan'ny : https://advox.globalvoices.org/2015/09/28/serbian-journalists-harassed-by-police-while-reporting-on-controversial-belgrade-construction-site/
 moron'i Belgrade.: https://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade_Waterfront
 Fomba fandikan-dalàna 30: http://www.istinomer.rs/clanak/1362/Ombudsman-Komunalci-za-14-minuta-napravili-30-prekrsaja
 nahazoan'ireo orinasa an-dranomasina roa izay tantànany ireo trano 24 any amin'ny toerana fialàntsasatra Bolgara. : https://www.youtube.com/watch?v=aEfapO97BCw
 fotoana misimisy kokoa: http://nuns.rs/info/news/26725/hoce-li-grad-beograd-smeniti-nacelnika-komunalne-policije.html
 fanambaràna : http://www.nuns.rs/info/statements/26689/opravdan-zahtev-za-smenu-nacelnika-komunalne-policije.html
 nanameloka : https://twitter.com/YUCOMoffice/status/695220124996014080
 tokony ho dimy taona lasa izay: http://www.coe.org.rs/eng/sub_tdoc_sr/?conid=1439
 nanjary nampifanolana : https://www.krik.rs/komunalni-nered/
 lahatsary nalefa teo aloha teo : https://www.youtube.com/watch?v=-cdWIWd4maQ
 fahefana bebe kokoa : http://www.istinomer.rs/clanak/1259/Komunalna-policija-ne-sme-da-ima-pravo-da-primenjuje-silu
 any amin'ny mpitsara avy hatrany, : http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010216/010216-vest10.html
 hampitombo ny : http://www.blic.rs/vesti/drustvo/sira-ovlascenja-komunalna-policija-ce-moci-da-legitimise-i-privodi/ccbjvnh
 anaty fitafin'olon-tsotra: http://mondo.rs/a870289/Info/Drustvo/Komunalna-policija-Beograd-izmene-zakona-komunalci-u-civilu.html